पहिलो दिन कोरियामा १८ हजार ५०० ले लगाए कोरो ना खो’प – Eps Sathi
February 27, 2021 997
दक्षिण कोरियामा फेब्रुअरी २६ तारिखबाट कोरो ना बिरुध्दको खो’प अभियान सुरु भएको छ। अभियानको पहिलो दिन १८ हजार ५०० जनाले खो’प लगाएको कोरियाली सन्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। कोरियाको विप’त ब्यवस्थापन तथा शुर।क्षा संयन्त्रले दिएको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो दिन १८ हजार ४ सय ८९ जनाले एष्ट्राजेनेका कम्पनीले उत्पादन गरेको खो’प लगाएका हुन्। यो खो’प २ डोज लगाउनुपर्दछ। पहिलो लिन उनिहरुले पहिलो डोज लगाएका हुन्।
शुक्रबार १८ हजार ४ सय ८९ जना मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले, स्वा’स्थ्य हेरचाहमा खटिएकाहरु तथा नर्शिङ होममा रहेका बि’रामीहरुले यो खो’प लगाएका हुन्। देशभरका २१३ वटा नर्शिङ सुविधा भएका १७ वटा शहरहरुमा यो अभियान सन्चालन गरिएको थियो।
कोरियाका आन्तरिक तथा सुर’क्षा मन्त्रालयले जनाए अनुसार खो’प लगाएकाहरुमा त्यस्तो कुनै गाऽह्रो हुने तथा स्वा’स्थमा प्रति’कुल अ’सर नदेखिएको बताएका छन्। सामान्य टाउको दुऽख्ने तथा ज्व,रो आउनेजस्ता लक्षण’हरु भने देखिएको तर यि लक्ष,णहरु सामान्य भएको बताइएको छ।
त्यसैगरी आन्तरिक तथा सुर’क्षा मन्त्रालयले बताएअनुसार फाइ’जर कम्पनीले उत्पादन गरेको खो’प पनि ५ वटा भ्याक्सिनेशन सेन्टरहरुबाट शनिवारदेखि लगाउन सुरु गरिनेछ। फाइजर कम्पनीको खो’प शुक्रबारनै कोरिया आइपुगिसकेको छ। शुक्रबार फाइजर खोप ५८ हजार ५०० डोज आएको हो। यहि खो’प अरु ५ लाख डोज मार्च महिनाको तेश्रो हप्ता कोरिया आउने जानकारी दिइएको छ।
Prev२३ गतेबाट खुल्ने भयो ज्योती लाइफको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी? कति कित्ता भर्ने?
Nextकोरियामा बा’लब’च्चा हुर्काउन बिदा लिने पुरु‍षहरुको संख्या बढ्दो